Uhamba kanjani phakathi kobukhulu? - Mytika Speak
Ikhaya / I-Universe / Uhamba kanjani phakathi kobukhulu?
Awuhambi phakathi Ubukhulu, sezakhiwe futhi zingaphakathi kuwe. Ukhetha nje ukuthi iyiphi ozokuzwa.
Imizwa yakho icacisa ukuthi yiluphi ubukhulu obhekene nalo njengamanje. Uma uzizwa uthukuthele, lapho-ke uhlangabezana nobukhulu obuthukuthele. Uma une-orgasm, uhlangabezana nobunye. Imizwa yakho iletha ubukhulu kuwe.
Uma usegumbini uzizwa uthukuthele lapho abanye abantu abajabulayo bengena, kuzofanela ukhethe ukubambelela kulolo laka. Ngaphandle kwalokho, ubungayidedela bese ukhipha ubukhulu obujabulisayo ongabuthola.
Impilo iyindalo evela ngaphakathi kuwe. Njengoba ubukhulu bungaphakathi kuwe, ukhetha ukuthi yiluphi ongaluthola ngemizwa yakho bese uluveza ngaphandle ukuze ukwazi ukubona / ukuzwa umphumela.
Nakhu ukuthi ubukhulu budlala kanjani ingxenye emzimbeni womuntu.
0D - Le yindawo yobunye ngakho ayikho into efana nomzimba.
1D - Yilapho amathambo akho akha khona njengemigqa yokumboza umphefumulo wakho ngogqinsi lomzimba oluvikelayo (i-Ego).
2D - Yilapho uqala khona ukwakha isithombe kepha kubukeka njengekhathuni. Akuqinile impela kepha kufana ne-plasma.
I-3D - Yilapho unesikhumba futhi ubukhulu abantu abangacabanga impilo ejwayelekile.
Qhudelana nabo bonke
kodwa uzizwe ungazinzile.
ishaya esifubeni sakho.
Veza amathemba akho
Khipha izandla zakho ezandleni
Indlela eya enjabulweni
shintsha ubukhulu bakho.
Amathegiukuqonda Ubukhulu umzimba womuntu izinkondlo ingokomoya
Amagama ka-Astrid uthi:
Novemba 18, 2020 ku-3: 05 pm
Hawu, ngiyabonga! Impela isikhuthazo ebengisidinga namhlanje ☺️
Novemba 18, 2020 ku-3: 07 pm
Ngijabule kakhulu ukuzwa leyo Astrid! 💕🙏💕